Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga Daniele Rugani Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Maqaalkayagu wuxuu ku siinayaa warbixin buuxda oo ku saabsan Daniele Rugani Taariikhda Caruurnimada, Taariikh nololeedka, Nolosha Qoyska, Waalidka, Nolosha hore, Nolosha, Gabadha, Nolosha shaqsiyeed, iyo waxyaabo kale oo caan ah oo xaqiiq ah laga soo bilaabo markii uu cunugga ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Daniele Rugani Noloshiisii ​​Hore iyo Kac. Dhibcaha Sawirka: Instagram iyo DailyMail.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu mar un galay warka sababaha qaldan- in uu noqdo cayaaryahankii ugu horreeyay ee ka socda Serie A ee ku dhaca cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan Coronavirus oo loo yaqaan Covid-19.
Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa garanaya sheekada dhammaystiran ee Daniele Rugani's Biography, gaar ahaan tan caruurnimadiisa taas oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda, iyada oo aan la sii amba qaadin, aan ku bilowno, ugu horreyn miiskeenna tusmada ka hor sheekada oo dhammaystiran.
Daniele Rugani Taariikhda Carruurnimadiisa:
Markii uu bilaabay, waxaa lagu naaneysaa “Daje Dani". Daniele Rugani wuxuu ku dhashay maalintii 29aad ee Luulyo 1994 hooyadiis, Lia Rugani iyo aabihiis, Ubaldo Rugani oo ku taal magaalada Lucca ee Bartamaha Talyaaniga. Kubbad sameeyaha ayaa adduunka u yimid inuu noqdo cunugii labaad ee laba carruur ah, oo u dhashay waalidkiisii ​​jacaylka badnaa.
Iyaga oo aan loo aqoon muwaadin Talyaani ah, ayaa Daniele ku soo barbaaray Codso Moriano deris ku yaal magaalada Lucca oo ay ka muuqato jacayl waalidkiis iyo walaalkiis ka weyn oo loo aqoonsaday Simeone. Hoos waxaa ku yaal sawirka mid ka mid ah waalidiinta Daniele Rugani- waa aabihiis super oo la arkey isagoo labadayda ah iyo walaalkiis ka weyn.
Daniele Rugani wuxuu ku koray shirkada jacaylka ee waalidkiis iyo walaalkiis ka weyn Simeone. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Markii uu ku koray Ponte oo Moriano ah, Rugani oo da 'yaraa wuxuu ahaa ilmo aan daryeel lahayn oo kalgacayl leh oo leh waxyaabo badan oo danaha hore ah oo ka soo jeeda ciyaarista kubbadda cagta iyo teniska illaa jaceylka-ice iyo dabaasha. Inaad leedahay aabbo jecel cayaaraha, Daniele aad bay ugu fududaatay inay kaqeyb gasho howlahan isboorti.
Aasaaska Qoyska Daniele Rugani:
Mid ka mid ah danaha isboortiga ee Rugani, gaar ahaan tan la xiriirta ciyaarista tennis-ka wuxuu ahaa isboorti uu da 'yarta la shaqeeyay qaar ka mid ah asxaabtiisa carruurnimada waqti-dhiman.
Dhanka kale, jaceylka Rugani ee kubada cagta wuxuu ka gudbay ku biirid saaxibtinimo, runti waxay ahayd ciyaar isboorti. Ma ogeyd?… Labada waalidba Daniele Rugani waalidkood (sawirka hoose) waxay ahaayeen taageerayaal adag oo kooxda Juventus ah, daacadnimo uu Rugani si fiican u qabtay.
La kulan waalidiinta Daniele Rugani. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Daniele Rugani waxbarashadiisa iyo shaqadiisa Buildup:
Ciyaaraha oo dhan, waxay ahayd jacaylka kubbadda cagta ee ka adkaaday. Sidaa darteed, lama yaabin in nin aad u da 'yaraa Rugani uu bilaabo aasaaska meheradda uu ka dhigto iskuulkiisa / naadiga kubada cagta ee maxalliga ah - Atletico Lucca. Isagoo jira da'da 6 (sanadka 2000), da 'yarta faraxsan ayaa macsalaameeyay kooxdiisi ugu horeysay ee akadeemiyadeed si uu u wajaho caqabado waa weyn.
Atletico Luca ayaa ahayd halka kulamada tartanku ay ka bilowdeen kubbada cagta. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Markii uu sii socday, Rugani wuxuu bilaabay shaqo dhis adag oo ku aadan nidaamka dhalinyarada ee naadiga kubada cagta ee Empoli. Halkaas, wuxuu ku qaatay in ka badan toban sano xirfadiisa ciyaareed (2000-2011) horumarinta xirfadahahiisa xirfadeed kuwaas oo hadda qayb ka ah qaab ciyaareedkiisa ciyaareed.
Sanadihii Hore ee Juventus:
Waqtigii uu Rugani ahaa 18 jir sanadkii 2012, Empoli wuxuu u ogolaaday Juventus heshiis amaah ah iyadoo labada dhinacba isha ku hayaan sida daafaca uu u soo muuqday qaab ciyaareed wanaagsan. Marwada hore ee Primavera (ka yar 20) koox dhalinyaro ah.
Wiilkii yaraa wuxuu ku fiicnaa kubbada cagta. Waxaa intaas sii dheer, Farxadda xubnaha qoyskiisa ee Daniele Rugani ma aysan jirin wax xaddidan waqtigaas oo uu ka caawiyay kooxdii da 'yarta ahayd ee Juventus inay ku guuleystaan ​​Coppa Italia Primavera intii lagu jiray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay (2012 - 2013).
Sawirkan qadiimiga ah ayaa sii xumaanaya maalinta laakiin xusuustii ku guuleysiga hanashada Coppa Italia Primavera ayaa weligeed ku sii jiri doonta maskaxda daafaca. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Qaab ciyaareedkiisii ​​Rugani ee tartankan ayaa ka dhigtay Juve inay wax walba ka hor istaagto inay heshiis wada-jir ah la galaan Empoli daafaca dambeedka bidix.
Wadada loo maro Taariikh nololeedka sheeko:
Markii shuruudihii heshiiska wada-lahaanshaha la dhammaystiray, Juventus ayaa Rugani dib ugu celisay Empoli ka hor ololihii xilli ciyaareedkii 2013-14 ee Serie B, iyagoo fursad u siinaya inuu isu caddeeyo inuu mudan yahay inuu noqdo rajo ay gabi ahaanba iibsan karto kooxda Juventus.
Wuxuu arkay fursad dib loogu celiyay Empoli oo dadaal badan ku bixiyay sidii loosii kordhin lahaa. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Nasiib wanaag, Rugani wuxuu ku fiicnaa inuu u beddelo fursadda inuu u weecdo mustaqbalkiisa maxaa yeelay tabarucnimadiisii ​​difaaca Empoli wuxuu kooxda u horseeday inay ku dhameysato kaalinta labaad ee Serie B oo ay si toos ah ugu gudubto Serie A oo ay weheliyaan Palermo oo markii ugu horreysay timid.
U Kaga Bax Sheeko Taariikh nololeed:
Rugani, xagaagii 2015 wuxuu si rasmi ah ugu soo laabtay Juventus 2015 ka dib markii uu qaatay xilli ciyaareed isagoo khibrad sare u leh kubada cagta Empoli. Taasi waxay calaamadisay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed isagoo ka caawiyay kooxda inay ku guuleysato horyaalnimada Serie A. Rugani sidoo kale wuxuu u noqday daafac muhiim u ah kooxda gaar ahaan ka dib Leonardo Bonucci u aaday Milan sanadkii 2017.
Si dhakhso leh waqtiga qorista Daniele Rugani ee Biography, daafaca ayaa la sheegay inuu helay dareenka adduunka MA awoodiisa difaaceed laakiin inuu noqdo xiddigii ugu horreeyay ee Serie A ee qandaraas la gala coronavirus oo sidoo kale loo yaqaan Covid-19.
Natiijo ahaan, daafaca ayaa ku jiray fikirka iyo salaadda taageerayaasha iyo saxaafada kuwaas oo si samir leh u sugayay war ka soo baxayo goorta uu xor ka noqon doono viruska isla markaana ku soo laaban doono garoonka.
Faafida iyo xaqiijinta barta ay ku leedahay kooxda Juventus ayaa ka dhigtay daafaca daafaca maxkamada mid caalami ah. Sawirka Sawirka: DailyMail.
Daniele Rugani Gabadha, Xaaska iyo Caruurta:
Iyada oo kor u qaadida caanka ah gaar ahaan helitaanka dareenka adduunka ee sababta khaldan, runtii waxaa jiray baaritaanno badan oo ku saabsan kubada cagta. Mid ka mid ah waxay ku saabsan tahay weydiimaha cidda Daniele Rugani ay saaxiibkaa noqon karto.
Ka dib markii aan sameynay baaritaan noo gaar ah, waxaan soo saarnay in daafaca uu qabo gabar saaxiibo ah oo haatan ah mid dhaqaale isla markaana aan waqti ku xirneyn, inuu xaaskiisa ahaan doono.
Daniele Rugani iyo saaxiibtiisba waxay u egyihiin si qumman. Miyayna ahayn?
Rugani waa jacayl aad u xiiso badan oo saaxiibtinimo oo ay wadaagaan gacalisadiisa, Michela Persico. Jacaylka - kuwaas oo aan lahayn wiilal (gabdho) ama gabdha aan guursan - wuxuu ku kulmay 2016 kahor ciyaar tennis ah oo ay Michela ka hadlaysay suxufiyad isboorti.
Isaga oo ah suxufi isboorti, Michela waa soo saare Tv-ga ah oo leh qurux soo jiidasho leh taasoo soo afjartay raadinta Rugani ee saaxiibbada cusub. Sida wadneheeda, waxay tijaabisay cudurka torotorool laakiin cudurka qatar ayaa si weyn u taageersan labada nin inuu dhakhso u bogsado.
Sidoo kale waqtiga qoraalka, waxaa jira war jabinaya SiiMeSports in Daniele Rugani saaxiibtiis iyo afadiisu inay ahaato (Michela Persico) ay xaamilo tahay hadda xitaa kadib markii uu ku dhacay fayraska. Xitaa waqtigaan hubanti la'aanta weyn leh, aan rajeyno labadiinaba isaga, Michela Persico, iyo cunuggu inuu noqdo mid caafimaad qaba kana xor ah viruska.
Daniele Rugani Nolosha Qoyska:
Difaacayaasha layaabka leh ayaa ku leh guusha safarkooda kubada cagta qoysaska taageera iyo qoyska Rugani reebban. Qeybtaan, waxaan kuugu soo qaadaneynaa xaqiiqooyin ku saabsan xubnaha qoyska Daniele Rugani ee ka bilaabanaya waalidkiis.
Ku saabsan Daniele Rugani Aabaha:
Rugani aabihiis, Ubaldo waa taageere aad u jecel kooxda Juventus iyo sidoo kale baaskiil baaskiil oo mar ahaan jiray labo jeer horyaalka talyaaniga. Isaga - waqtiga qorista - wuxuu wakiil ka yahay agabyada kalluumeysiga sidoo kale wuxuu aabe u yahay wiilkiisa taasoo ka dhigtay inuu weligiis ku faano inuu yahay taageere Juventus.
Miyaad aragtay sawirka carruurnimadi hore ee Daniele Rugani oo leh aabihiis Ubaldo?
Ku saabsan Daniele Rugani hooyadeed:
Rugani hooyadeed Lia waa macalin dugsi oo labalaab u noqda macalinkiisa akhlaaqda. Waligeed ma joogsato inay la taliso daafaca inuu diiradda saaro kulamadiisa oo uu iska caabiyo fikradaha xun xun ee loo yaqaan 'geniuses'. Maxaa intaa ka badan? Iyadu waa taageere kooxda Juventus waana nin jecel jaceylkaas.
Daniele Rugani wuxuu la qaatay hooyadiis Lia. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan Daniele Rugani Walaalaha:
Daniele Rugani wuxuu leeyahay hal walaal oo ka weyn oo loo yaqaan Simeone. In kasta oo uusan ahayn kubad, walaalkii ka weyn ayaa daneynaya kubada cagta waxaana la arkay isagoo dabaaldegaya isagoo u dabaaldegaya guushii Rugani dhowr jeer.
La kulan Daniele Rugani walaalkiis oo u dabaaldegaya mid ka mid ah guulaha waaweyn ee difaacashada. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan Daniele Rugani ehelkiisa:
Ka fog Daniele Rugani reerahooda, wax badan lagama garanayo abtiriskiisa iyo xididdada qoyskiisa. Gaar ahaan sida ay ula xiriirto hooyadeed iyo awooweyaashiis. Sidoo kale, ma jiraan wax diiwaangelin ah oo ku saabsan eedeysanaha adeerkiis, eedooyinkiisa iyo adeeradooda. Horumarku wuxuu u gudbinayaa guud ahaan guddiga loogu talagalay ehellada eedooyinka iyo adeerka.
Daniele Rugani Noloshiisa Shaqsiga:
Ma ogtahay in Rugani ay sameysay astaamo la mid ah oo astaamo u ah shaqsiyaadka ay calaamada zodiac ay Leo tahay? Waa nin akhlaaq leh, xarrago leh, dabeecad leh, hawl kar ah, himilo leh oo u furan inuu muujiyo xaqiiqooyin ku saabsan noloshiisa shaqsiyeed iyo tan gaarka ah.
Dhaqdhaqaaqyada uu Rugani ku hawlan yahay danahiisa iyo hiwaayadaha ay ka mid yihiin baaskiil wadista, kalluumeysiga, ciyaarta teniska, dhageysiga muusikada, ciyaarta, safarka, dabaasha iyo waqti fiican la qaadashada qoyskiisa iyo asxaabtiisa.
Waxaan ka shaki qabnaa inuu isagu kalluunkan culus qabtay laftiisu. Si kastaba ha noqotee, wax shaki ah kama qabno awooddiisa uu ku qabsan karo kuwa aad uga yar. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqda Nololeed ee Daniele Rugani:
Qeybtaan, waxaan kuu sheegi doonaa sida uu difaacu u sameeyo iyo lacagtiisa u isticmaalo. Runtu waxay tahay, markii la qorayay Daniele Rugani's Biography, wuxuu haystay lacag dhan $ 39 milyan.
Qulqulka hodanka daafaca ayaa asal ahaan ka soo jeeda mushaharka iyo mushaharka uu ka helo ciyaarista kubbadda cagta halka ogolaashaha ay wax weyn ku soo kordhinayso dakhligiisa. Lacagtan, Rugani wuxuu awoodi karaa inuu ku noolaado nolosha raaxada leh ee garsoorayaasha kubada cagta ee aan wax dhibaato ah ku qabin inay ku qarash gareeyaan hantida sida baabuurta iyo guryaha.
In kasta oo uu qiime weyn ku leeyahay qiimaha uu leeyahay iyo qiimaha uu ka helayo suuqa, daafaca waxa uu doortaa in uu ku noolaado qaab nololeed yar maxaa yeelay wali lama arkin isaga oo ku socda gawaarida qalaad. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha guriga uu kula nool yahay saaxiibtiisa weli lama oga.
Way ka fududdahay in la arko Daniele Rugani iyo gabadha uu isqabayo ee ku raaxeysanaya fuulista baaskiillada marka loo eego baabuurta dhabta ah. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqda Aan La Sheegin:
Si aad u soo aruuriso sheekadeena carruurnimada ee Daniele Rugani iyo taariikh nololeedkooda, halkan waxaa laga helayaa xaqiiqooyin yar yar oo aan la aqoon ama aan laga warqabin oo ku saabsan daafaca.
Xaqiiqda #1: Burburkii Mushaharka Daniele Rugani:
30kii Maarso 2019, Rugani wuxuu qandaraaska u kordhiyey Juventus, isagoo kooxda ku sii haynaya ilaa June 2023. Qandaraaskaan cusub wuxuu kordhiyay qiimihiis saafiga ah, taasoo ah muujinta inuu jeebka ka qaadanayo mushaharka oo dhan. € 3.1 million sanadkiiba. U soo jebinta mushaharka Daniele Rugani tiro yar, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda.
Lacagtiisu heshay Pound Sterlings (£)
Waxa Uu Helaa Sanadkii € 3,172,000 £ 2,863,459 $ 3,407,235
Waxa uu helo Bishiiba € 264,333 £ 238,621 $ 283,936
Waxa uu helo Toddobaadkiiba € 61,000 £ 59,655 $ 70,984
Waxa Uu Hano Maalintii € 8,714 £ 8,522 $ 10,140
Waxa Uu Helaa saacaddiiba € 363 £ 355 $ 422.52
Waxa Uu Helo daqiiqaddii € 6.05 £ 5.91 $ 7.04
Waxa Uu Ku Helaa Hal sekan € 0.10 £ 0.09 $ 0.11
Tani waa inta Daniele Rugani kasbaday tan iyo markii aad bilowday daawashada Boggan.
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan shaqaalaha Talyaanigu waxay u baahan yihiin inay shaqeeyaan ugu yaraan 5.9 sanado lagu kasbado € 264,333 taasoo ah lacagta Daniele Rugani ay hesho bil gudaheed.
Xaqiiqada # 2: Daniele Rugani Qiimeynta FIFA:
Daafaca ayaa leh qiimeyn guud oo FIFA ah 82. Qiimaynta waa isku darka awoodaha Rugani iyo xirfadiisa waxay muujineysaa ilaa iyo inta uu daafacaan yimid xitaa isagoo aan weli gaarin qiimeyntiisii ​​la filayay ee aheyd 85 dhibcood.
Miyuu dhab ahaan ku koray isla eeyga? Dhibcaha Sawirka: Instagram.
Tattoos: Rugani waa bilaash xaga taranka marka la qorayo waxaana suuragal ah inuusan laheyn farshaxanka jirkiisa inta ka harsan mustaqbalkiisa. Difaac ahaan, wuxuu mudnaanta siiyaa dhisme weyn oo jidhka ah - oo u dhiganta dhererkiisu yahay 6 fiit 3 inji - in ka badan qurxinta jirka.
Xaqiiqooyin dheeri ah:
Daniele Rugani Jacaylka Xayawaanka Guryaha Mara Tan iyo Caruurnimada
Rugani had iyo jeer wuxuu ku weynaa xayawaannada guryaha ah gaar ahaan eeyaha ilaa noloshiisa hore ilaa taariikhda. Waxaa laga arki karaa hoosta isagoo waqti fiican la qaadanaya xayawaanka rabbaayadda ah ee uu had iyo jeer u arko inuu yahay saaxiibbadiisa ugu dhow.
Daniele Rugani Diintiisa:
Daniele Rugani waalidkiis waxaa lagayaabaa inay ku barbareeyeen isaga oo u hogaansan diinta masiixiga ee diinta masiixiga Ma ogeyd?… Magaca "Daniele" waa Cibraaniga Cibraaniga ah oo magaca Christian ah oo macnaheedu yahay "Ilaahay waa xaakinkayga". Markii aan taas ogaannay, u-helidda ayaa si weyn u taageersan in xubnaha qoyska Daniele Rugani ay yihiin Masiixiyiin.
Daniele Rugani Xaqiiqada Xaqiiqada:
Ma ogeyd in sanadka 1994 uusan muhiim u aheyn uun abuurihii dhalashada Rugani? Waxay ahayd sanadkii ay PlayStation soo saartay qalabkeedii ugu horreeyay. Intaa waxaa sii dheer, 1994 wuxuu arkay sii deynta filimmo heer sare ah sida Forrest Gump. Sidoo kale, Shawshank Redemption iyo Disney's Lion King animations ayaa ku dhacay shineemooyinka sanadkaas.
Bal eeg dhacdooyinka Muhiimka ah ee ka dhigtay Daniele Rugani dhalashada sanadka (1994) mid xiiso leh. Dhibcaha Sawirka: NME.
Ugu dambeyntiina, Daniele Rugani Xaqiiqadiisa Taariikh nololeedka, waxaan kuusoo bandhigaynaa wiki aqoontiisa. Jadwalka hoose wuxuu kaa caawin doonaa inaad u hesho macluumaadka ku saabsan isaga hab fudud oo fudud.
Daniele Rugani Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka
Magaca buuxa: Daniele Rugani.
naaneys; Daje Dani.
Taariikhda iyo da'da: 29 Julaay 1994 (da'da 25 sida Maarso 2020).
Meesha dhalashada: Lucca, Talyaaniga.
Waaliddiinta: Ubaldo Rugani (Aabe) iyo Lia Rugani (Hooyo).
Walaalo: Simeone Rugani (Walaal ka weyn).
Gabadh: Michela Persico (Fiance iyo haweeneydu inay ahaato).
Dhererka: 1.90 m (6 ft 3 gudaha).
Miisaanka: 84 kg.
Shaqada: Kubadda Cagta (Dhabarka dambe).
Hantida FACT: Thanks for reading our Daniele Rugani Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Miralem Pjanic Sheeko Xeeldheer Xogta Xogta Aan Laheyn
Claudio Marchiso Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Taariikhda wax laga beddelay: 26-ka Meey, 2019